Isitshalo sodaka olomile, imishini yokufanisa, izinsiza kusebenza ze-PC - iShantui
Izici 1.Convenient inhlangano disassembly, ukuhamba eliphezulu lenguquko, elula futhi fast, futhi ephelele umsebenzi indawo nezimo. Isakhiwo 2.Compact futhi enengqondo, high modularity design; Ukusebenza kucacile futhi ukusebenza kuzinzile. 4.Umhlaba ongaphansi, ukukhiqiza okuphezulu; Isistimu kagesi nohlelo lwegesi ifakwe okuphezulu nokuthembeka okuphezulu. Isitshalo sokuxubana kukakhonkolo esingumakhalekhukhwini yimishini yokukhiqiza ukhonkolo ehlanganisa isitoreji sezinto, isisindo ...
Izici 1.Convenient inhlangano disassembly, ukuhamba eliphezulu lenguquko, elula futhi fast, futhi ephelele umsebenzi indawo nezimo. Isakhiwo 2.Compact futhi enengqondo, high modularity design; Ukusebenza kucacile futhi ukusebenza kuzinzile. 4.Umhlaba ongaphansi, ukukhiqiza okuphezulu; Isistimu kagesi nohlelo lwegesi ifakwe okuphezulu nokuthembeka okuphezulu. Imodi Yokucaciswa SjHZS025Y SjHZS040Y SjHZS050Y SjHZS075Y Ukukhiqizwa kwethiyori m³ / h 25 40 50 ...
Izici 1. Isakhiwo samahhala sesisekelo, imishini ingafakwa ekukhiqizweni ngemuva kokuthi indawo yomsebenzi ilinganiswe futhi yaqiniswa. Hhayi nje ukunciphisa izindleko zokwakhiwa kwesisekelo, kepha futhi unciphise umjikelezo wokufaka. Umklamo we-modular womkhiqizo wenza kube lula futhi kusheshe ukuqaqa nokuhambisa. 3. Isakhiwo esihlangene jikelele, umsebenzi omncane womhlaba. Imodi Yokucaciswa SjHZN025F SjHZN040F SjHZN050F SjHZN075F SjHZS050F SjHZS075F SjHZS100F SjHZS150F The ...
Izici Isitshalo sakhiwa uhlelo lokubhaka, uhlelo olunesisindo, uhlelo lokuxuba, uhlelo lokulawula ugesi, uhlelo lokulawula umoya womoya nokunye okuhlanganisiwe, izimpushana, okufakwayo oketshezi namanzi kungenziwa kukalwe ngokuzenzekelayo kuhlanganiswe nesitshalo. Ama-aggregates alayishwe ukuhlanganiswa komgqomo ngumlayishi wangaphambili. Impuphu idluliswa isuka esilojini iye esikalini sesisindo nge-screw conveyor .Amanzi nesithasiselo se-liquid akhishwa esikalini. Zonke izinhlelo zokulinganisa ziyizikali zikagesi. Lesi sitshalo sizenzakalelayo ...
I-Shantui Janeoo Machinery Co., Ltd. ingumkhiqizo wokuqala wokuhlanganiswa kokhonkolo nemishini yokuhamba yamabhizinisi amakhulu kahulumeni, yi-CREC, i-CRC kule minyaka edlule umlingani wezamasu, isitshalo esikhulu sokuxuba ukhonkolo, isitshalo sokuxuba ukhonkolo, isitshalo sokuxuba esomile isitshalo, isitshalo esixubene nebhizinisi eliphezulu, iphampu yokudonsa, imishini yokulahla udoti kanye nabaxube abahlukahlukene.
Isikhathi sokwakha: Inkambu yesicelo ka-Okthoba 2020 (uhlobo lobunjiniyela): Uhlobo lwezinto zokwakha ezisemadolobheni: Okokusebenza kokuxuba ukhonkolo Isicelo: Ngo-Okthoba 9, 2020, ngemuva kwezinsuku eziningi zokufakwa nokulawulwa kude, iShantui Janeoo Marine SjHZS75-3E imishini yokuxuba ukhonkolo ihlangana ngempumelelo .. .
Ukusetshenziswa kweSjHZS90-3B Xixiayuan Water Conservancy Project
Isikhathi sokwakha: Inkundla yesicelo kaSepthemba 2020 (uhlobo lobunjiniyela): ezolimo, amahlathi kanye nokonga amanzi uhlobo lwezinsiza: imishini yokuxuba ukhonkolo SjHZS90-3B usimende silo yisilo esidala samakhasimende. Isicelo: NgoSepthemba 2020, izitshalo ezimbili ezihlanganisa ukhonkolo zeSjHZS090-3B zeShantui J ...
Isitshalo sokuxuba ukhonkolo wasolwandle iShantui Janeoo SjHZS75-3E uqede ngempumelelo ukukhiqizwa komthwalo osindayo ngo-Okthoba 9,2020.Kwezinsuku eziningi zokuqondiswa kude, kuvula umgwaqo wokwakha inani lamakhasimende aseMyanmar. Ethintwe yisifo esiwumqedazwe, unjiniyela wesevisi ngemuva kokuthengisa akakwazi ukuya e ...
IShantui Janeoo ifinyelela ukuthengiswa kwabantu abaningi phesheya kwezilwandle zombili izitshalo ezihlanganayo namaloli okuxuba
Muva nje, isitshalo sokubhaka ukhonkolo iShantui Janeoo 2XSjHZS120-3B namasethi ayi-10 amaloli okuxuba ukhonkolo angamamitha-skwele ayi-12 athunyelwe ngempumelelo ePhilippines, futhi uhambo lwenkonzo yokusiza iphrojekthi yokwakha iMetro Manila luzoqala maduze. Esizeni sokulethwa, amalungu aqedile ...
Izinsizakalo zeShantui Janeoo iShiheng Canggang iphrojekthi yokwakhiwa kwesitimela
Muva nje, amasethi ayisithupha weSjHZS240-3R okuxubana kukakhonkolo okusetshenziswa yiShantui Janeoo ekwakheni iShiheng-Canggang Intercity Railway afakiwe futhi ahanjiswa ngempumelelo kumakhasimende. Yonke imishini isebenzisa ukwakheka kwesilayidi seshidi, futhi imishini ngayinye ifakwe ...